Development Network for Immigrants ─ အးကးဗ ိုင်ူးးရ ်အ်ကးက ယ်း င်ူးပေြ်ကးင်ူးသ ကေးင်ူးအးရး
အးကးဗ ိုင်ူးးရ ်အ်ကးက ယ်း င်ူးပေြ်ကးင်ူးသ ကေးင်ူးအးရး
Date : 2016/12/27
Updated : 2017/12/6 下午 04:36:00
က ူးအက်ေးရးဂါး န့်နနမှံ့လနက်းရနမှ သေးယေ သမနူးးသ ို့ းရူးးသ းူးေးရးက်သ မနူးး မနမှတ်သူးးးရန်--
1. က ူးအက်ေးရးဂါး န့်နနမှံ့လနက်းရနမှ သေးေ သမနမှယး န်လးသ မနူးးပူးး ပနည်ူး ံိုူး2တ်အေးင့််ေြ်ကည့််ေးရမည်းသည်။ သံသယးဖအ်အးရးယေးရးဂါလကဂါးတေ ုးရနမှ ါက နက်း င်ူးယေ ူးမက် ိုင်းရးပလကံေ ူးမှု ံယးင်ူးနနမှင့််ေ းရူးးမ က် ာ့်သေည့််ေ ယေ သ အးးရင်ူးပူးးး ိအိုင်၍ းရးနေ်သ ို.ပေြ်ကးင်ူးြ်ကူးးးရမည်းသည်။
2. ပမနိ ူးသူးးမနူးးက ူးအက်ေးရးဂါး န့်နနမှံ့လနက်းရနမှ သေးေ သမနမှး န်လးပ းူး
နေးက်ယေးရးဂါလကဂါး မတေ ုးရနမှ းရသေး်လည်ူးာ 8 တ်ပြ်ကးပမ လ င် က် ံမှုယး ိလို ်အရ်တ င် က န် ံိုူးပသိုံူးး ိးရမည်းသည်။ ပကယ်င်၍ လ င် က် ံသည့််ေ ပမန ိူး သမူးးမနမှး က ိုယ်နေ်သည်းဖအ် ါက ကလေူးမေ ူးပ းူး သည်ပမ က န် ံိုူးပသိံုူးးိးရမည်းသည်။
3. ပမန ိူးသမူးးးဖအ် ါက က ူးအက်ေးရးဂါး န့်နနမှံ့လနက်းရနမှ သေးေ သမနမှယး န်လးပ းူးယနေးက် ိုင်ူးတ တ င်ယေးရးဂါလကဂါးမတေ ုးရသေး်လည်ူးာ က ိုယ်နေ် ယ မည် ို ါကယး န်လးပ းူးနေးက် 8 တ်ပြ်ကးပ းူးနေးက် ိုင်ူးမနမှသး အတင်က ိုယ်နေ် ယ းရန် ပလကံး ိမူးး ါသည်းသည်။
က ူးအက်ေ သမနူးးးရ၏ ပ နက်ပလက်မနူးးနနမှင့််ေ န ိုင်ငံး းူး းရူးးသ းူး ပလကံး ိး င်ူးမနူးးပတ က် ယေးရးဂါမ န်ူး နိ ်ေးရူးအင်တးးရ၏ ပင်တးနက်အးမနက်နနမှးတ င် ငေ်ေးရးက်ြ်ကည့််ေးရှုန ိုင် ါသည်းသည်။